I-Firm Overview - I-NJ & NY Yezindlu Nezindlu, i-Selectate, Defence Defence ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Qinisekisa Ukubuka konke
AmaHhovisi Omthetho kaPatel, uSoltis kanye noCardenas kumele athole ithalente lezomthetho eliseNew York naseNew Jersey, elibheke ukubekwa kwamacala angaphambili, ukuguqulwa kwamalimboleko, ukuqothuka, ukuthengiswa kwezakhiwo kanye nokuthengiswa kwezindawo eNew Jersey. Uma ucabanga ukuthi ungadinga i NJ Isazi Sokubikezela or Ummeli Wokubikezela Nge-NY qala ngokukhuluma neyodwa MAHHALA namuhla. Siyinkampani yomndeni egxile ekukhonzeni abantu kanye namabhizinisi abo. Ukuthi udinga ukuzivikela kusengaphambili eNew York noma eNew Jersey noma ku-Will yomndeni wakho. Sinezindlela ezisemthethweni zokwazi nobungcweti bakho. Isinyathelo sokuqala sokulungisa noma iyiphi inkinga ukuqonda ukuthi unezinketho. Khuluma nommeli namuhla mayelana nazo zonke izinketho zakho.
Asizithatheli wonke amacala esiwavezwayo. Uma singehluleka ukukuhlula, sizokutshela. Sizocubungula zonke izinketho zakho, kepha ekugcineni kosuku, uma singakwazi ukukusiza, sizokutshela.
Sinabameli abagxile ezicini ezihlukile zomthetho. Sinezimeli ezinelayisense eNew York ezigxila ekuVikelelweni Kwembonakalo, Ukuthengiswa Kwezezakhiwo, Ukuqothuka, Ukuhlola, kanye Nokuqoqwa Kwezikweletu / Ukuhlanganiswa. Sinezimeli ezinelayisense eNew York ezigxila ekuVikeleni iSecurity, Ukuthengiswa Kwezezakhiwo, Ukuqothuka, Ukuqokwa, Umthetho Womndeni Nokuqoqwa Kwezikweletu / Ukuhlanganiswa. Uma usithinta sizodinga ukuxoxa nawe kafushane ukuqinisekisa ukuthi uxhumeke kubameli abangakusiza kangcono ngodaba lwakho.
UNE-OPTions - TALUS TO US TODAY
Sine inqubo yesinyathelo ye-3 yokuqinisekisa ukuthi singakusiza, noma sikumise ukhulume nommeli ohlukile ngohlu olufingqiwe lwamaqiniso azungeze isimo sakho. Siyaqonda ukuthi silungele wonke umuntu, kepha sizokusiza ukuze ummeli olandelayo oxhumana naye, ukwazi ukuthola izimpendulo ozidingayo.
Uma ufuna ukuthola ithimba labameli elihle kakhulu eliqonda izindawo eziningi zomthetho eNew Jersey, siyithimba labameli abanolwazi abazokuphatha kahle njengeklayenti. Sinabameli abaningi abasebenza ngomthetho ohlobene Nezindawo Zokuthengiswa Kwezezakhiwo, Izikweletu, Umthetho Wezokuvikela Okusobala, Ukubolekwa Kwemali, Izindlela Ezinhle Zokuthenga noma Ukuthengisa Izakhiwo Nezindlu, i-Will & Powers of Attorney, i-probate & Estates, Ukukhululeka Kwezikweletu, Ukuqothuka Komuntu, kanye Nebhizinisi Ukuqothuka. Sizovikela amalungelo akho njengoba sisebenza njengeqembu ukukunikeza usizo lwangempela. Abameli bethu baqonda izindlela zonke lezi zinhlobo zezinto ezixhumana ngazo. Sizovikela ubumfihlo bakho ukuthi ungasishayela ucingo noma usivakashele kwelinye lamaHhovisi ethu ukuze kuboniswane. Akunandaba ukuthi ukhetha ukuxhumana kanjani ne-firm yethu sizodlula izinketho zakho.
Sinehhovisi eJersey City, NJ ngaphesheya kwe-Hudson County Courthouse; I-Hackensack, NJ ekhoneni kusuka eBergen County Courthouse; IFreehold, NJ phansi umgwaqo ovela eMonmouth County Courthouse, Manhattan, NY unesiza eMidtown New York City; kanye neBrooklyn, NY ngaphesheya kweKings County Courthouse ephansi komgwaqo ovela enkantolo yaseBrooklyn Bankruptcy ukuhlangana namakhasimende ethu. Sinikeza ukubonisana kwamahhala ngamacala amaningi azo zonke izindaba zasenkantolo eNew Jersey naseNew York.
Xhumana nathi futhi sizokwenzela izinto ze-3
Ukufuduka kwase-US: Ukuthunyelwa komndeni okwenzelwe izingane ezingaphezulu kweminyaka engama-21 noma izingane ezishadile
Ukufuduka kwase-US: Ababaleki kanye ne-Asylum